100-Milyan oo Caruur ah ayaa ku dac-darraysan Dunida..
100-Milyan oo Caruur ah ayaa ku dac-darraysan Dunida..!!
Waxaa la yiraahdaa:- Labada Waalid ruuxa kaliya ee ay u oggol-yihiin inuu iyaga ka wanaagsanaado, kana nolol iyo magac-sarreeyo waa Ubadka ay iyagu dhaleen , ee uu iyaga jirkooda Alla ka soo jaray, magacooda iyo summaddoodana wata.
Waalidiintu waxay Awooddooda iyo wax-qabadkooda oo dhan isugu geeyaan korinta, ababinta, daryeelka iyo xannaanada Ubadka; si ay hadhow Ubadku u noqdaan kuwii anfaca naftooda, waalidkood, dadkood, dalkooda iyo diintoodaba. Murti Carbeed ayaa waxay ahayd:- " Caruurteenna waa Beerkeenna oo dhulka soconaya..", walow ay mar-mar dhacdo nuxurka Murtida ah:-"Nin aad dhashay kuma dhalin".
Waxaa mararka qaarkood dhacda Ubadka oo dayacma, taladuna ay Waalidka farahooda ka baxdo. Faqri, Jahli, Bur-bur qoyseed ama Waalidka oo ay ajashiisu gasho iyo sababo kale ayay dayacaaddu ku imaan karaysaa; waxayna natiijadu noqotaa Ubadkii oo ku daata Waddooyinka, halisyo wejiyo badan lehna la kulma.
Xafiiska xagga wararka(News) ugu qaabilsan Qarammada Midoobay(UN) ayaa warbixin uu dhowaan soo saaray kaga dayriyay halista isa soo taraysa ee Caruurta ku dayacan Waddooyinka Dalal badan(Ciyaal-Suuq). Wuxuu xafiisku hoosta uga xariiqay Dadyowga Dunida : in ay Arrintan fiiro gaar ah u yeeshaan,kuna baraarugaan; siiba markii ay soo korortay tirada caruurta dib-jirka ah ee la fara-xumeeyo.
Caruurta ku dayacan Waddooyinka, waxaa ka mid ah kuwa seexda wadda-lugeedyada iyo Suuqyada ee iibiya Wargeysyada iyo Alaabooyinka yar-yar, dawarsada, wax-xada, ama sidii kale ee ay nolol-maalmeedkooda ku heli karayaan ku kaca.
Arrimaha Caruurta waddooyinka ayaa waxay noqotay Mushkilad ay dalal badani ka sheeganayaan oo u maara-waayeen. Dawlado aan yarayn, oo ay xitaa ku jiraan kuwa dalalka horumaray ayaa cabanaya.
Tirakoob la hor-keenay Shirweynihii daryeelka Caruurta Carbeed ee la qabtay sannadkii 2003-da, ayaa waxaa lagu soo bandhigay:- in guud ahaan tirada Caruurta Adduunka ee ku dayacan Waddooyinka iyo Seyladaha dalal kala geddisan ay isu-gayntoodu kor u dhaafayso 100-Milyan oo Canug.
40-Milyan oo tiradaas ka mid ah, waxay ku nool yihiin Laatiin Ameerika; 30-milyan waxay joogaan Qaaradda Aasiya; 20-Milyanna Afrika ayay daadsan yihiin; 25-Milyan oo kale waxay ku kala firarsan yihiin dunida inteeda kale.
Daraasaddan ayaa intaas ku daraysa :- in tiro ka badan Laba-Milyan oo Caruurta Dunida ka mid ah ay joogto ula kulmaan fara-xumayn kaga timaada :-Ma-xishoodayaal iyo Iimaan-laawayaal aan Allah aqoon, kuwaas oo Dabinno xaaraan ah u dhigta Ubadka soo koraya.
Caruurtaas la fara-xumeeyo hal-Milyan oo ka mid ah waxay ku nool yihiin Qaaradda Aasiya. 300-kun oo kalena waxay joogaan dalka Maraykanka oo isagu lagu tilmaamo inuu yahay kan dunida ugu horumarsan.
Waxaan is-weydiiyay:- Tolow tan iyo muddadii uu Dalku burbursanaa, intee ayay la ekaan karaysaa: dayaca, dacdarrada, dulmiga iyo daryeel la'aanta haleeshay( loo geystay ) Ubadka Soomaaliyeed...?!!.
Imisaa Ubad la dilay ?!!. Meeqa ayaa dadyow iyo Diimo kale loo iib-geeyay ?!!.Intee ayay Baduhu liqeen ?!!. Tiro intee la eg ayuu weli Jahligu ragaadinayaa ?!!.Curyaannimo iyo Bukaan-socodnimo intee ayay u sugnaatay..?!!. Intee ayaa la agoonteeyay..?!!. iwm.
Waa Su'aalo aan jeclahay in uu Jawaabteeda iyo xal u heliddeedaba is-weydiiyo Masuul, Aqoon-yahan iyo wax-garad kasta oo Soomaaliyeed.